MOMBA ANAY - Shanghai Long Jie Plastics Co., Ltd.
Shanghai Longjie Plastics dia mpamokatra matihanina amin'ny vokatra extrusion PVC. miaraka mihoatra ny folo taona ny indostria sy ny traikefa fanondranana, novolavolainay ny votoatin'ny vokatra ho Fantsom-baravarankely PVC, fefy, sidina visy, fametahana lamba, tatatra orana, famolavolana PVC ary vy ary Aluminium railing, sns. Ny ekipa Long Jie dia hiasa amin'ny R&D ary hanolotra vahaolana mamorona ho an'ny mpanjifantsika manerantany miaraka amin'ny vokatra sy serivisy tsara indrindra. Matoky izahay fa i Long Jie no ho mpiara-miasa aminao ary manantena ny hiara-miasa aminao izahay!
Masinina fanamboarana hi-tech
Manana tsipika famokarana extrusion 12 izahay, ny fahaizan'ny extrusion isan'andro dia manodidina ny 30 taonina, pelletizer iray ary milina fampifangaroana mandeha ho azy telo. Masinina 2 milina fanoratana milina mandeha ho azy, milina fanaovana sokitra 2, milina boribory 3, milina fantsom-bokotra mihena 2 setroka, milina fanapahana 1,
Manana injeniera 5 ao amin'ny ivon-toeran'ny r & d izahay. Mpitantana matihanina izy ireo izay manan-talenta marobe miaraka amin'ny traikefa an-tsosialy sy asa an-taonany maro. Izy ireo dia mirotsaka amin'ny fitantanana orinasa, drafitra marketing, marketing, varotra iraisampirenena, fampiroboroboana vokatra ary majors hafa. Fantatr'izy ireo ny fomba fitantanana ny rafitra toekarena samihafa.
Toetra iraisan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa mpitantana:
Fianarana farany: diplaoman'ny oniversite na ambony, fikolokoloana matanjaka,
Traikefa amin'ny asa: traikefa niainana nandritra ny taona maro sy traikefa amin'ny asa, manana fahombiazana miavaka eo amin'ny sehatry ny asa sy fahaizana manavao zava-baovao.
Fifandraisan'ny samy olona: manana hafanam-po mahery vaika amin'ny fiarahan'ny samy olona.
Kalitao matihanina: fahamendrehana, araho ny tanjon'ny fenitry ny orinasa, araho ny lalàna nasionaly sy ny fitsipi-pitondrantena.
Mpikambana ②team core:
Liu lei: talen'ny teknika an'ny orinasa
Talen'ny fampandrosoana sy famolavolana orinasa
Ipqc matihanina 1 manana fahaiza-manao matihanina mahay amin'ny sehatry ny extrusion sy fonosana;
2 manana rafitra feno izahay hahazoana antoka fa manamboatra vokatra avo lenta;
3 izahay dia manome fampaherezana ho an'ny mpiasa araka ny asany;
5 manana rafitra fanaraha-maso kalitaon'ny vokatra feno izahay, 2 ora fanaraha-maso feno sy fanaraha-maso tsy ara-dalàna, fanehoan-kevitra haingana rehefa hita ny olana, ary araho ny fizotran'ny vahaolana mandra-pamaha ny olana tanteraka, ary manoratra tatitra tsy ara-dalàna ho an'ny fampiofanana momba ny kalitaon'ny tena izy. angona;
6 manana fiofanana tsy tapaka momba ny mpiasa manara-penitra izahay hanatsarana ny fahaiza-manao matihanina sy ny toetra etika entinay, hamporisihana azy ireo hanao antoka fa izay rehetra nataon'izy ireo dia fenitra hihaonana.
7 dia mampiasa fomba maro hanandramana ny kalitaon'ny vokatra.
1.) fomba fanaraha-maso ara-batana, manana milina fitiliana andry cantilever mandroso izahay, milina fitiliana baolina milatsaka, mpandalo hamafin'ny rockwell, milina am-pita, sns.
2.) fomba fanaraha-maso simika, lafaoro hafanana tsy tapaka, testeran'ny fahanterana, metatra fotsifotsy;
3.) fomba fanaraha-maso biolojika. Izahay dia manankina matetika ny vokatray mba hizahan-toetra avy amin'ny masoivoho mpanadihady antoko fahatelo mahay miaraka amin'ny tatitry ny fitsapana; io koa dia mitaky ny mpamatsy hanana tatitra momba ny fanandramana mifamatotra aminy;
4.) fomba fanandramana karazana vokatra, fanandramana mahazatra, fanandramana santionany, sns.;
5.) fomba fanaraha-maso sensory, ny ekipa mpikaroka ekipa fanandramana kalitao dia tanana efa niasa ho an'ny orinasa nandritra ny taona maro, manana fahaiza-manavaka miavaka amin'ny olan'ny kalitaon'ny vokatra izahay; amin'ny santionany, ny santionany izay maneho ny toetra mampiavaka ny vokatra dia azo raisina tsara ho an'ny fizahana ara-tsiansa.
Fitsapana baolina milatsaka
Masinina fitiliana fiatraikany Cantilever
Boaty hazavana loko mahazatra
Lafaoro hafanana tsy tapaka
Ny milina fantsom-panafody dia novidiana endrika jinwei Machines co., Ltd., Ny lefitra lefitry ny orinasa indostrialy milina plastika ao Shina. Manana milina extrusion miisa 65 miisa roa izahay ary milina mpanampy enina 45 karazana, ary ny tsipika famokarana tsirairay dia manana fahaiza-manao famokarana 3 taonina mifangaro pvc. Ny fizotry ny fizarana aoriana sy ny fonosana fonosana dia mekanika be, miaraka amina mpandraharaha mahay 40, izay afaka mandany tanteraka ny fahafaha-manondrana ivelany; manome antoka ny fahafaha-mamokatra isan'andro vokatra 30 taonina.
Momba ny fifehezana kalitao:
Fampisehoana orinasa ankapobeny:
Fampisehoana asan'ny orinasa:
Fampisehoana asa famonosana orinasa:
Tanjaka ara-teknika sy famolavolana Ary ny fahaiza-manao r & d
Hatramin'ny niorenany dia nifikitra hatrany tamin'ny foto-kevitra momba ny fampandrosoana siantifika izahay, naka ny fikarohana teknolojia sy ny fampandrosoana ary ny fanofanana ny mpiasa ho tanjon'ny fampandrosoana. Manana departemanta r ​​& d natokana izahay, miantehitra amin'ny fanohanana ara-teknika avy amin'ny foiben'i Shanghai, ary manana traikefa manankarena sy mpiasa r & d teknika vaovao. Manome lanja lehibe ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra vaovao na ny fizotrany vaovao izahay, manangom-bola amin'ny fikarohana sy fampandrosoana marobe isan-taona, nahatratra vokatra tena tsara ary nangataka patanty maromaro.
Amin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny vokatra dia manamafy ny fifanakalozana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo andrimpanjakana fikarohana ao an-toerana mifanaraka amin'ny fampandrosoana teknolojia sy ny fangatahana tsena izahay. Hanova ny valin'ny fikarohana siantifika amin'ny famokarana amin'ny alàlan'ny fampidirana teknolojia sy ny fampandrosoana ny fiaraha-miasa ary hamorona tombony ho an'ny orinasa. Amin'izao fotoana izao dia namolavola karazana fefy sy fefy isan-karazany mety amin'ny saha maro izahay, toy ny zaridaina, fiarovana anatiny, tokotany, zaridaina, toeram-piompiana soavaly ary karazan-tsivana hafa, ka amidy tanteraka any Eropa ireo firenena, Etazonia, Aostralia. , Nouvelle Zélande sy Azia atsimo atsinanana. Ground.
Nanangana fiaraha-miasa fikarohana sy fampandrosoana maharitra izahay miaraka amin'ny vondrona anhui conch, ary nanao fikarohana lalina sy fivoarana momba ny toetra ara-batana sy simika amin'ny endrika profil ivelany, ary nahatratra vokatra tsara. Ary amin'ny fampiroboroboana sy fampiasana eny an-tsena, tena afa-po ny mpanjifa ary neken'ny mpanjifa ny firaisan-kina.
Fomba fitantanana r & d orinasa
1) aorian'ny nahazoana ny torolàlana momba ny r & d, ny sampana teknika dia mandrindra ny ekipa famolavolana sy fampandrosoana, mamaritra ny mpitarika ny famolavolana, mamolavola ny drafitra famolavolana r & d ary manomana ny "Drafitra famolavolana sy fampandrosoana"
2) ny tompon'andraikitra amin'ny famolavolana dia mamaritra ny atin'ny interface teknika isan-karazany mifanaraka amin'ny drafitra famolavolana sy ny toetra sy ny zavatra takiana amin'ny vokatra, mampita ny interface teknika amin'ny mpamorona rehetra, ary manangona ny "Lisitry ny fidirana sy ny fampandrosoana".
3) ny mpamorona dia mamolavola ny drafitry ny vokatra arakaraky ny fidiran'ny endrika. Ny talen'ny teknika dia nampiantso ny mpiasa mifandraika aminay mba hanao fampisehoana drafitra. Aorian'ny fandaniana ny drafitra, ny tompon'andraikitra amin'ny famolavolana dia manatanteraka famolavolana ara-teknika mifanaraka amin'ny drafitra nankatoavina, ao anatin'izany ny sary sy ny fizotrany, ary manangana mpiasa mifandraika amin'izany handinika ny famolavolana, hanao firaketana ary hanomana ny "tatitra momba ny famolavolana sy ny fampandrosoana".
4) ny mpamorona dia mitarika fanamarinana ny vokatra miorina amin'ny valin'ny fanadihadihana, ary manomana ny "Tatitra fanamarinana ny endrika sy ny fampandrosoana"
5) aorian'ny fahombiazan'ny karazana fitsapana vokatra, ny sary dia hanoritra ny fizotran'ny fanodinana vokatra sy ny torolàlana momba ny famokarana, ny mpitarika ny famolavolana dia hamerina hijery azy, ary ny talen'ny teknika dia hamoaka izany aorian'ny fankatoavana, ary hanomana ny "lisitry ny vokatra famolavolana sy fampandrosoana".
6) aorian'ny famoahana ireo antontan-taratasy ara-teknika momba ny vokatra dia mametraka baiko santionany ny sampan-draharaha misahana ny asa, ary ny sampana mpamokatra dia manao santionany arakaraka ireo antontan-taratasy teknika; mamolavola sy mampiseho ny santionany ireo mpamorona ary manao tatitra momba ny famintinana ny famokarana.
7) aorian'ny famokarana andrana amin'ny andrana mahomby dia hatao ny famokarana andrana kely. Ny olona tompon'andraikitra amin'ny famolavolana dia manamafy ny fahombiazan'ny vokatra sy ny tondro ara-teknika amin'ny alàlan'ny fitsapana ny fahombiazan'ny vokatra teknika sy ny hevitry ny mpampiasa ary manomana ny "Tatitra fanamafisana ny endrika sy ny fampandrosoana".
8) aorian'ny fahavitan'ny famolavolana, ny olona miandraikitra ny famolavolana dia mandinika hatrany ny fampiasana vokatra vaovao ary manatsara hatrany ireo vokatra vaovao.
Mametraha kolontsaina "Customer-centric". Ireo singa enina amin'ny kolotsaina orinasa: Cost, kalitao, serivisy; tanjona, dingana ary fanombanana. Ny fanavaozana ny teknolojia sy ny fanavaozana ny fitantanana dia mihazakazaka amin'ny dingan'ny fananganana kolotsaina orinasa.
Manoloana ny toe-javatra vaovao sy ny fotoana vaovao, suzhou langjian dia nametraka ny hevitra stratejika hoe "Orinasa taonjato, fanavaozana zato taona, marika zato taonany".
1) ny paikady iraisampirenena dia niova avy amin'ny orinasa tsy miankina sinoa za-draharaha ho lasa orinasa maoderina misy marika iraisam-pirenena sy fahaiza-manao amin'ny famokarana sy ny asany
2) tetika fidirana tsena-manitsy ny fametrahana ny tsena kendrena.
3) tetika fampandrosoana ny vokatra-mamolavola vokatra avo lenta
Sarin'ny kolontsain'ny orinasaCustomer Group
Fampiratiana tanjaky ny fampirantiana